အညာမြေမှာ ဧရာဝတီဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားတယ် | MoeMaKa Burmese News & Media
ကိုအောင်မှိုင်း ● ချဉ်ဖတ်အိုး
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ အမိန့်
ဆောင်းယွန်းလ - "အမေရိကန်ဖဲဝိုင်း"
မြင့်ကျော် - သေဒဏ်
ကာတွန်း မောင်ရစ် - တမတ်သား
ကာတွန်း ကိုခေတ် - ကွင်းဆက်
ထွန်းခိုင်၊ ဝင်းနန္ဒာ ● ဘဏ်ချေးငွေနှင့် စစ်ဆေးဆဲ ဘီလီယံ ၂ဝ ကျော် အရှုပ်တော်ပုံ
ကာတွန်း ဘီရုမာရဲ့ အောင်ဆန်းကိုသတ်တာ ဘယ်သူလဲ?
ရန်ငါ စည်းခြားဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်
ကာတွန်း မိုးသက် - ဗုိုလ်အောင်ကျော် ကို တိုင်တည်ခြင်း
မောင်စွမ်းရည် - နွားကျောင်းအပြန်
မောင်စွမ်းရည် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ ထောက်ခံဆုတောင်းပွဲ
ရိုးတံ (ပုလဲနယ်) ● နံရံအကွယ်များ
ကျော်ဟုန်း - လက်ဝဲရစ် သင်္ကေတအတွက် အခြေခံ ဖတ်စာ
လင်းသက်ငြိမ် ● ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ကဗျာ
မင်းကိုနိုင် ● မြိတ်ဆိပ်ကမ်းက တိတ်တဆိတ် အလွမ်း
သျှင်မျိုးငယ် - မှာတမ်း
လင်းသက်ငြိမ် ● တယောက်တည်း နေ့တွေ
လင်းမြတ်အိမ် ● ညများ (၁၀)
Join 89,179 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month February 2019 (64) January 2019 (138) December 2018 (147) November 2018 (163) October 2018 (183) September 2018 (177) August 2018 (224) July 2018 (209) June 2018 (190) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၂
ကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေ မွေးဖွားခဲ့တယ် …။
ကျုပ်တို့ရဲ့အသွေးအသားတွေ စတင်ခဲ့တယ် …။
ကျုပ်တို့ရဲ့ ဘဝရပ်တည်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ် ….။
ဧရာဝတီ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းခဲ့တယ် …။
ဒီမြစ်ရိုးမှာ အစုန်အဆန်သွားခဲ့တယ် …။
ဒီမြစ်ရေကို သောက်ခဲ့တယ် …။
ဒီမြစ်ရေကို သုံးခဲ့တယ် …။
အညာမှာ မြန်မာ မြန်မာမှာ အညာ
မြန်မာရဲ့သမိုင်း မရိုင်းရအောင် ….
ဧရာဝတီ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားတယ် … ။
One Response to အညာမြေမှာ ဧရာဝတီဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားတယ်
U Thi Ha Tint Swe on April 13, 2012 at 11:35 pm
We liked U Pain’s bridge,Taung Tha Man,Innva,Mandalay,Burma on Burma’s long democratic revolution and although we loved our country,were exiled by Junta Regimes.
Ledu Restaurant - လီဒူ စားသောက်ဆိုင်
Htay H Tint - Tax & Accounting Services